कमला गुरुङ बुधबार, मंसिर १०, २०७७, १७:३७
काठमाडौं- विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा टाउकोको शल्यक्रिया गर्ने क्रममा एक युवकको मृत्यु भयो। केराबारी गाउँपालिका-९ बेलचौकरीका ३० वर्षीय बिक्की ऋषिदेवको शनिबार शल्यक्रियाकै क्रममा मृत्यु भएको थियो।
टाउकोमा पानी जमेका कारण उनको शुक्रबार शल्यक्रिया गरिएको थियो। तर शल्यक्रिया सफल नभएपछि शनिबार मृत्यु भएको हो।
मृत्युपछि दाहसंस्कारका लागि आफन्तले उनको शव घाटमा लगे। घाटमा पुर्‍याएर शवको अन्त्येष्टि गर्न लाग्दा उनको पेटमा ५ वटा टाँका देखियो। 'टाउकोमा भेटिनुपर्ने टाँका पेटमा भेटिएपछि अन्त्येष्टि गर्न गएका आफन्तलाई शंका लाग्यो। आफन्तले शवको अन्येष्टि गरेनन्।
यसपछि चिकित्सकको 'लापरबाही'ले बिरामीको मृत्यु भएको आफन्तले आरोप लगाए।
जलाउन ठिक्क पारिएको शव उठाएर उनीहरूले धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पोस्टमार्टमका लागि लगे।
अस्पतालका न्यूरो सर्जरी विभाग प्रमुख डा प्रकाश काफ्ले टाउकोमा जमेको पानी निकाल्न गरिने शल्यक्रियामा पेट चिर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको बताउँछन्। यस्तो प्रक्रियालाई चिकित्सकीय भाषामा भेन्ट्रिक्युलोपेरिटोनियल सन्ट (ventriculoperitoneal (VP) shunt) भनिन्छ। मृतक बिक्कीको शल्यक्रिया पनि डा काफ्लेको नेतृत्वमा भएको थियो।
टाउकोमा जमेको पानी समयमै ननिकाले बिरामीको मृत्युसमेत हुन सक्ने उनले बताए। आफन्त र स्थानीयले बुझ्दै नबुझी आरोप लगाएको अस्पतालको भनाइ छ।
भेन्ट्रिक्युलोपेरिटोनियल सन्ट भनेको के हो? र यो घटनामा के भएको थियो? भन्ने विषयमा हामीले अस्पतालका विभागीय प्रमुख डा काफ्लेसँग कुराकानी गरेका छौं:
यो सिभिएर हेड इन्जुरीको केस हो। यस्ता कतिपय केसमा टाउकोमा पानी जम्छ। जसलाई हाइड्रोसेफालस (hydrocephalus) भनिन्छ। यो समस्या भएपछि हामीले बिरामीको टाउकोमा जमेको पानी निकाल्न टाउकोबाट पाइप निकालेर नाइटो नजिकै राख्छौं। यसलाई भेन्ट्रिक्युलोपेरिटोनियल सन्ट भनिन्छ ।
यो शल्यक्रियामा पानी जमेको ठाउँमा पाइप राख्छौं। टाउकोमा जमेको पानी निकाल्न शरीर भित्रभित्रै पाइप राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पाइट पेट नजिकै राख्नुपर्छ। यो स्ट्यान्टर्ड अपरेसन हो।
सामान्यतया हरेक व्यक्तिको टाउकोमा पानी सर्कुलेसन हुन्छ। तर कुनै कारणवश टाउकोमा पानी सर्कुलेसन भएन र कुनै भागमा पानी जम्यो भने बिरामीको मृत्युसमेत हुन सक्छ। टाउकोमा जानी जमिराख्यो र समयमै निकालिएन बिरामीको मृत्यु हुन सक्छ।
बिरामीको ज्यान जोगाउन यस किसिमको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ। यसका लागि टाउकोबाट पाइप हालेर घाँटी हुँदै शरीरको अगाडिको भागबाट ल्याएर कलेजो या नाइटोको वरिपरि पाइप हाल्नुपर्छ। शरीरबाट पानी बाहिर फाल्ने विधिमध्ये यो एक हो। टाउकोमा जमेको पानी बाहिर निकाल्न नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि यही प्रक्रिया अपनाइन्छ। यो शल्यक्रिया बिरामीको अवस्था हेरी एक/दुई घण्टा लाग्छ।
बिरामीको अंग निकालेको, पेटको अपरेसन गरेको भन्ने आरोप सत्य होइन। बिरामीका आफन्तले बुझ्दै नबुझी आरोप लगाएका छन्। हामीले बिरामाका आफन्तलाई यसबारे सबै जानकारी दिएर मात्र शल्यक्रिया गरेका थियौं।